High School တွင်လူဆိုး Escape (High School Gangster Escape) - 2Game
သေနတ်ပစ်နဲ့တူနေတဲ့ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်ပြီးနောက်လူဆိုးဂိုဏ်းများအတွက်အကျဉ်းထောင်ထက်လျော့နည်းခြင်းမရှိကြောင်းဒီ High School တွင်ထဲကခိုးကြောင်ခိုးဝှက်။ တိုင်းရာဇဝတ်မှုပြောင်းရွှေ့စောင့်ကြည့်ဖို့လုံခြုံရေးကင်မရာများရှိပါတယ်။ ဒီ High School တွင်လုံခြုံရေးအစောင့်ထိမှန်ခြင်းနှင့်သတ်ပစ်လက်နက်များဖမ်းပြီး။ ဂိုဏ်း၏မြို့မှလွတ်မြောက်ရန်။ လုံခြုံရေးကင်မရာကိုရှောင်ကြဉ်ပါ။ အဆိုပါ High School တွင်လုံခြုံရေးအစောင့်ရန်ခက်ခဲအချိန်ပေးပါ။ မြို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကတာဝန်အရာရှိများနှင့်အတူအရူးရန်ပွဲအနိုင်ရ။ အထက်တန်းကျောင်းချစ်သူတွေကိုထိခိုက်; မိန်းကလေးနှင့်ရည်းစား။ ဆရာနှိပ်ပါ။ သူတို့ကိုရှောင်။ ထွက်ပေါက်အမှတ်တိုင်အောင်ရဲကား Chase သငျသညျမခံပါနဲ့။ သင်ကမြို့ရဲ့အကောင်းဆုံးလူဆိုးဂိုဏ်းဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါ High School တွင်ဘဝကနေဘေးကင်းလုံခြုံထောင်ထဲမှာထွက်ပေါက် Making သင်ပြုရန်လိုအပ်သမျှသောသူတို့ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း၏အဆင်ပြေသငျသညျလူဆိုးဂိုဏ်းထွက်ပေါက်မစ်ရှင်၌ဤအရူး High School တွင်နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်ကြောင်းရဲကိုသတ်ဖို့ရှိသည်လျှင်။ သင့်ရဲ့လက်နက်တွေနှင့်အတူခက်ခဲသူတို့ကိုနှိပ်ပါ။ သင်၏အသက်တာအဘို့ကို run ။ သူတို့သည်သင့်ကိုသတ်ခြင်းမပြုမီအစောင့်ကိုသတ်! ချစ်စရာကောင်းအထက်တန်းကျောင်းချစ်သူတွေ၏ရင်ခုန်စရာချစ်ခြင်းမေတ္တာဇာတ်လမ်းဖျက်ဆီး။ ရာဇဝတ်မှုဂိမ်းများကိုစွန့်စားမှုပျော်ရွှင်ခံစားပါ!
အဆိုပါခေတ်မီနည်းပညာမြင့်မားတဲ့လုံခြုံရေးစစ်ဆေးမှုများနှင့်အစောင့်များ၏အဆက်မပြတ်လှည့်ကမဖြစ်နိုင်သငျသညျမှလွတ်မြောက်ရန်ဘို့လုပ်လို့မရပါဘူး။ စာသင်ခန်းခန်းမ & စင်္ကြံထဲမှာ sneaking ကဘေးကင်းထွက်ပေါက်လုပ်ပါ။ အဆိုပါရန်လိုရဲများကနှင့်အစောင့်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေ၌သငျကူညီပေးနိုငျသောအရူးခန်း၌ဝှက်ထားလျက်ရှိသော tools တွေထွက်ရှာပါ။ တစ်ဦးဘေ့စ်ဘောလင်းနို့များကဲ့သို့လက်နက်များနှင့်အတူစစ်မှန်သောရဲတပ်ဖွဲ့ရဲများကတိုက်ခိုက်မှု & Kill ။ သင့်ရဲ့စူပါဒီ High School တွင်ထွက်ပေါက်ရှင်သန်မှုဂိမ်းထဲမှာတဦးတည်းသွားလာရင်းအတွက်အစစ်အမှန်ရဲအရာရှိများ၏ဖယ်ရှားပစ်ရနျလှုံ့ဆျောထားပါ။ သင်ပိုမိုစွမ်းအင်ရရန်ဆေးကိုခိုးယူနိုငျသညျ။ High School တွင်အနီးအနားမှာရှိတဲ့မြို့နယ်စပ်ရဲတပ်ဖွဲ့ထံမှ Hide ။ ဥပဒေများချိုးဖောက်။ , လုံခြုံရေးကင်မရာများရှောက်သွားလုံခြုံရေးအရာရှိများနှင့်အတူစစ်တိုက်ခြင်း, ခက်ခဲသည့်ယောက်ျားလေးများ & မိန်းကလေးငယ်များ hit နှင့်အစွန်းရောက်ကိုယ်ပျောက်လူဆိုးဂိုဏ်းကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အတူစင်္ကြံထဲမှာခိုးကြောင်ခိုးဝှက်ပါ။ ပြင်းစွာသောအစောင့်များ, ရန်လိုမှူးများနှင့်လက်နက်ကိုင်ရဲများကဖယ်ရှားပစ်ရမယ့်သင့်လျော်သောကြံစည်မှုကြိုတင်စီစဉ်ထားပါ။ ၎င်းတို့၏ဦးခေါင်းနှင့်ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ခက်ခဲနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်ရဲကိုသတ်ဖို့ကိုသုံးပါ။ ဒါဟာသင့်ရဲ့လူဆိုးဂိုဏ်းကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ပညာတရားကိုသုံးပါကတစ်ဦးပြစ်မှုဆိုင်ရာအမှုနှင့်အတူအကျဉ်းထောင်မှလွတ်မြောက်မှကြာဘာပဲလုပ်ဖို့အချိန်ပါပဲ။ ဒီနှိပ်စက်ငရဲ၌သင်၏အသက်ကိုမဖြုန်းတီးပါနဲ့။ မှလွတ်မြောက်ရန် Run! ရာဇဝတ်မှုဂိမ်းများကိုစွန့်စားမှု!
High School တွင်လူဆိုး Escape features တွေ:
ချောမောယောက်ျားလေးများနှင့်တော်တော်လေးမိန်းကလေးများနှင့်အတူ√ Amazing 3D High School တွင်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး
အဆိုပါ High School တွင်ဘဝထွက်ပြေးလာသူများ√ရီးရဲလ်စိတ်လှုပ်ရှားစရာ
√စိတ်ဝင်စားဖို့ဂိမ်း Play စ
√အမျိုးမျိုးကိုတိုက်ဖျက် Tools များ
√ရင်သပ်ရှုမောဖွယ် & High Quality 3D Graphics
Android အတွက် High School တွင်လူဆိုး Escape (High School Gangster Escape) အလွန်ရေပန်းစားသည်နှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဂိမ်းကစားထောင်ပေါင်းများစွာ၏မည်သည့်ငွေပေးချေမှုမပါဘဲရဖို့အတှကျဝမျးသာပါလိမ့်မယ်။ ငါတို့သည်သင်ကူညီနိုငျပါသညျ! အခမဲ့ဂိမ်းကို download လုပ်ပါရန်။ ဒေါင်းလုပ်အလွန်ရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်: လိုချင်သောဖိုင်ကိုရွေးသင် file ကိုရချင်သောနညျးလမျးမြား၏တဦးတည်းကိုရွေးပါထို့နောက် "အခမဲ့ High School တွင်လူဆိုး Escape (High School Gangster Escape) apk download လုပ်ပါ" ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ အနည်းငယ်လွယ်ကူသောခြေလှမ်းနှငျ့သငျတက်ဘလက်သို့မဟုတ်ဖုန်းများအတွက်ဂိမ်းအပြည့်အဝဗားရှင်းခံစားကြသည်! မိုဘိုင်းဂိမ်းကိုခံစားဖို့အကောင်းဆုံး gadgets တစ်ခုမှာ iPhone ကိုဖြစ်ပါသည်, High School တွင်လူဆိုး Escape (High School Gangster Escape) iOS အတွက်ထိပ်တန်းဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမဆိုငွေပေးချေခြင်းမရှိဘဲပြုလုပ်ကစားရန်သင့်ကိုကူညီနိုငျပါသညျ! iPhone အတွက် High School တွင်လူဆိုး Escape (High School Gangster Escape) ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ဖို့, ငါတို့သည်သင်တို့၏ကိရိယာ၏မော်ဒယ်ကို select ရန်သင့်အားအကြံပြု, ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စနစ်ကအသင့်တော်ဆုံးဂိမ်း app များကိုရှေးခယျြပါလိမ့်မယ်။ ဒေါင်းလုပ်အလွန်ရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်: လိုချင်သော .ipa ဖိုင်ကိုရွေးသင်ကစားပွဲရချင်သောနညျးလမျးမြား၏တဦးတည်းကိုရွေးပါထို့နောက် "အခမဲ့ High School တွင်လူဆိုး Escape (High School Gangster Escape) ကို download လုပ်ပါ" ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ အနည်းငယ်လွယ်ကူသောခြေလှမ်းနှင့်သင်အိုင်ပက်သို့မဟုတ်, iPod တို့အတွက် High School တွင်လူဆိုး Escape (High School Gangster Escape) ခံစားနေကြသည်။ ထိုအသတိရ! ကျနော်တို့နေ့စဉ်အခမဲ့ IPA ဂိမ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့စုဆောင်းမှုကို update ဒါညှိနေဖို့!